Sida loo tabobaro Travel Sida Nomad A Iyadoo Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sida loo tabobaro Travel Sida Nomad A Iyadoo Europe
Haddii aad tahay socotada Solo oo aad rabto si ay u tababaraan safarka sida miyiga ah, ka dibna aad tahay meel sax ah. safarka tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu fiican in safraan Europe haddii aad rabto in ay la kulmaan wax kasta oo Europe leeyahay in ay bixiyaan. waxa ay noqon magaalooyinka, ama Bbc dabiiciga cajiib ah aad ku raaxaysan karaan oo dhan by safraya tareen.
Waa maxay more, safraya tareen sida miyiga ah wuxuu leeyahay wax badan oo ka mid ah faa'iidooyinka kale. Waxaad ka heli in ay la kulmaan wax kasta oo waqtiga aad, iyo tareeno aad bixiyaan suurtagalnimada loo sameeyo si habsami ah oo aan mashaakil kasta. Waxaa laga yaabaa in gaabis ah mararka qaarkood, laakiin ma jirto stress in hab this ee safarka, halka diyaarado waa wax gebi ahaanba ka duwan. Hadaad ku safarto diyaarado, waxaa jira stress si joogto ah buux- garoomada diyaaradaha iyo tallaabooyinka ammaanka overzealous. Waa maxay more, mararka qaarkood, waxaad heli doontaa si aad u socoto si dhakhso ah haddii aad qaado tareenka!
Waayo, kuwanu iyo sababo kale oo badan oo, safraya tareen on shuruudaha aad waa waxa ugu wanaagsan in aad samayn karto. Haddii aad rabto in aad bilowdo this quudhin reer guuraaga sixir, article tani kaa caawin doonaa inaad talo iyo talooyin ku saabsan sida si fiican u samayn.
Waxyaabaha ugu muhiimsan si ay u fiirso Marka doonaysaa inaad tabobaro Travel sida Nomad a
Ka hor inta aadan bilaabin aad tareenka Travel sida biimayn ah Nomad, aad leedahay si ay leeyihiin doonista loo sameeyo, iyo aad leedahay si ay leeyihiin lacagta.
Haddii aad rabto in aad noqon tuug ah tareen socotada, waxaad yeelan doontaa dhibaato ah ma haddii aad shaqayso sida wariye madax banaan oo ama gurigaaga ka. shaqo kasta oo aad samayn karto on your laptop, oo aad samayn kartaa in meel kasta oo.
Haddii aad raba inaad nasasho qaadato laga bilaabo shaqada ilaa fasaxa, aad u baahan doontaa in aad lacag caqli qaataan. Waxa ugu fiican waa ay jiraan qaar ka mid ah xal u caawin.
Ogaada in haddii safar tareen waayo muddo 30 ama ka badan dooran pass caalamka Interrail. Laakiin tikidhada Single aad bixiyaan fursad ay ku safraan guud ahaan inta badan Europe ee laguugu sahlo, waxaa riyo miyiga ah ee samaynta. Waxaad ka heli si ay u tagaan goorta iyo meesha aad rabto in aad, iyo in sida ugu fiican ee ay u abuuraan waayo aragnimo safarka u gaar ah.
Wax kasta oo aad doorato safarka tareenka aad, you can still lacag badbaadin sidan.
Sida loo keydsado Lacagta Markaad Tababbarto Safarka sida Reer Guuraa
Waxa ugu fiican oo ku saabsan noocan ah ee waayo-aragnimo waa in aad ka muuqo ku qaataan doonaa lacag ka yar. by this, waxaan uga jeednaa in marka aad tababar safarka sida miyiga ah, waxaad heli doontaa waayo-aragnimo ugu fiican haddii aad joogtid hostels cheap, kariyo aad cuntada, iyo in ka badan.
Maciin bidi hab this safarka idinka badbaadin doonaa lacag.
lacagta ugu badan ku bixisay markii Tareen Travel sida Nomad a aado jaale qolka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad hostels, waxaad badbaadin kartaa lacag aad u badan sida ay tahay kale oo badan oo la awoodi karo badan hotels oo waxaad bixisaa waayo-aragnimo fiican oo dheeraad ah oo xusuus. Waa maxay more, marka aad keligaa u safarto, aad ballansan kartaa qolka kasta oo dad badan ku sugan, taas oo ah ikhtiyaarka ugu jaban. Oo noogu aamini, waxaad ubaahan doontaa tan sababtoo ah tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad lashaqeysato dadka kale ee safarka ah ee isku fikirka ah.
Dhanka kale, haddii aad rabto in aad la kulmaan dadka deegaanka, waa in aad isticmaasho Couchsurfing, maxaa yeelay, sidaas waxaad heli doontaa in la joogo dadka deegaanka. Plus, ay ka badan ayaa kuu sheegi kara magaalada ay ku saabsan iyo muujiyaan meelaha oo dhan madadaalo aad u qalantaa booqanaya.
Waxa ku xiga iska cuno ee kaydka waa, si fiican u, cunidda. Waxaad badbaadin kartaa lacag on cunto diyaarinta cuntada aad ee hostel ama guryaha. Inta badan hoteelada iyo guryaha waxay bixiyaan jikooyin aad ugu isticmaali karto bilaash. Waa maxay more, fursad kale Hostel ee waa in laga lalmiyaa baxay dadka iyo diyaariyo qaar ka mid ah cuntada si ay u wadaagaan.
Safarka tareenka waa talooyin Reer guuraa ah
Haddii aad tahay qof Tareen Travel sida nooc ka mid ah Nomad ee qalafsan,, joogaysa hostels waa wax aad u Sujuudaan doonaa sida ay tahay, waayo, dadka aad sida.
Haddii aad tahay qof Tareen Travel sida nooc ka mid ah Nomad of naag af gaaban ah, waxa aad helaysaa in ay ku riday yar dadaal haddii aad rabto in aad joog dadka kale. Waxa ugu wanaagsan waa in ka dib markii dhowr maalmood, aad doonaa isticmaashay in ay. Ugu dambayntii, aad u jecel doonaa jidkii aad hesho si aad joog dadka kale isagoo socotada miyiga ah.
Ma aha in aad si aad u isticmaasho galida iyo sariirtiisii, in la deegaanka joogo; waxa kale oo aad u isticmaali kartaa si joognaa iyaga la. app waxaa loo isticmaali karaa si ay u dejiyaan meetups leh dadka deegaanka oo jecel ajaanibta qaadashada xalay ka soo baxay.
Iska pickpockets ah! Sida kiiska la magaalo kasta oo kale ee caalamka, magaalooyinka Yurub leeyihiin pickpockets iyo dambiilayaasha kale ee isku daya in ay ka faa'iidaystaan ​​dalxiisayaasha. Waxaad u baahan tahay inaad ka taxadartaa, oo waa in aad aqriso oo ku saabsan xaaladda jeeb siibe waayo, meesha aad booqashada ku. Mar kasta cilmi online ka hor booqashada magaalo.
Had iyo jeer isticmaal apps ka dhigi kartaa nolosha miyiga safar raaxo badan. Si ay ula socdaan kharashyada, wax badan oo ka mid ah apps waxay noqon kartaa asaxaabta ugu wanaagsan.
Xusuusnow inaad iftiinka safarka. Haddii aad ku socoto in ay miyiga ah tareenka u safraya, aad leedahay doonaa waqti fudud oo kaliya siday waxa lagama maarmaan ah. Hostels bixiyaan wax badan oo ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah sida shukumaan, timo iyo sida, sidaa darteed uma baahnid in aad idinkaa keeno. Plus, sida caadiga ah waxay leeyihiin Makiinadaha dhar dhaqidda iyo qalajiya in aad isticmaali kartaa euro ama laba, sidaa darteed uma baahnid inaad dhar aad u badan oo aad la qaadato midkood. Haddii aad rabto in badan oo ah alaabtii safraan, backpacking laga yaabaa in doorasho wanaagsan.
All oo dhan, safarka tareenka sida miyiga ah waa waayo-aragnimo u qurux badan oo kaaftoomi-free. Waxaad booqan kartaa meelo badan oo si fudud oo dhan ee guud ahaan dalalka qurux badan sida France, Germany, Italy, iyo in ka badan. Plus, aad hesho si aad u aragto baadiyaha qurux badan iyo Bbc cajiib ah dabeecadda leeyahay in ay bixiyaan. No kale ee doorashada safarka ku siin doonaa waayo-aragnimo aan la ilaawi karin oo xiiso leh oo caynkaas ah.
Samee ah in Tareenku Travel u fiican sida Nomad a qorshe ka hor iyo Iibso The Tigidhada in Tareenku Waxaad u Baahan Tahay, oo aad la dhigay doonaa si ay u bilaabaan tacaburka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#traveleurope europeantravel europetravel talooyin trainjourney Tranride tareenada caarada tababarka talooyin tareenka tareen safarka Talooyin safarka tareenka safarka tareenka safarka traveltips